Yintoni kwaye kutheni kukho bloatware kwifowuni yakho ye-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Yintoni ibloatware kwi-Android?
Kungenzeka ukuba uvile nge-bloatware kwi-Android ngamanye amaxesha. Lixesha apho uninzi lwabasebenzisi benkqubo yokusebenza baqhelene nalo, nangona uninzi lungazi ukuba yintoni, okanye iziphumo ezinazo kwifowuni yethu. Ke ngoko, ngezantsi siza kukuxelela ngakumbi malunga nekota, ebaluleke kakhulu kwindalo yonke ye-Android.
Ekuqaleni, Igama elithi bloatware lalisetyenziselwa ukuthetha ngohlobo oluthile lwesicelo. Nangona ukuhamba kwexesha kuye kwavela, kwaye intsingiselo yayo igcina inxenye yesiseko sayo, kodwa iye yabanzi ngandlel 'ithile.
1 Yintoni ibloatware?
2 Kutheni i-bloatware kwi-Android?
Ligama elizelwe kwisayensi yekhompyuter. Iikhompyuter zokuqala zazinendawo encinci yokugcina, eyathi yabangela ukuba umenzi asebenzise izicelo ezimbalwa ngangokunokwenzeka, kuphela ezo zazifuneka kwaye zibalulekile. Kodwa, njengoko itekhnoloji iqhubekile, amandla ogcino akhule ngokumangalisayo. Ke le nkxalabo yokwenza elona thuba linyamalale.
Oku kuthetha ukuba ezinye izicelo zaziswa kwiikhompyuter, ukuze igama elithi bloatware lizalwe. Yi isoftware enezinto ezimbalwa, ayisebenzi kangako, kodwa ithatha indawo enkulu. Ngokukodwa wayethetha ngohlaziyo lwenkqubo yokusebenza, okanye ezinye izicelo zomthonyama.
Nangona ixesha lihamba, ukongeza ekufikeni kweefowuni ze-Android, Ixesha elithi bloatware litshintshile ngendlela elula. Kule mihla, sihlala sithetha ngayo ngokuba yi-bloatware xa sibhekisa kwezi zicelo eziza kufakwa kwangaphambili kwiifowuni zethu ze-Android. Ezi ziqhelekileyo zizicelo ezenziwa ngabavelisi okanye abantu besithathu kwifowuni.
Olu hlobo lwesicelo alunayo inkxaso yabasebenzisi. Ngokuyintloko kuba zininzi kakhulu. Ngokuqinisekileyo uqaphele, ngaphandle kokuba ube nefowuni ye-Android Go. Inani lezi ntlobo zezicelo likhulu kakhulu, oko kuthetha ukuba kuthatha indawo eninzi kwifowuni. Abasebenzisi abaninzi bakhetha ukuzikhupha, nangona kukho ezinye, njengoko zivela kwinkqubo, ezingenakususwa, ngaphandle kokuba uyingcambu. Amaxesha okuba iblatware eluncedo kwi-Android anqabile ngokwenene.
Kutheni i-bloatware kwi-Android?
Esona sizathu sokuba sifumane olu hlobo lwesicelo kwi-Android kungenxa yokuba ifayile ye- Abaphuhlisi bemivuzo efanayo umenzi ukuba nabo kwifowuni. Ngaphandle kokuba zizicelo zomenzi, kuba uphawu ngalunye kwi-Android luzisa iiapps zalo kwizixhobo abazibeka kwimarike. Kwimeko yeapps zomntu wesithathu, zinokubangela ukuba ixabiso lefowuni liphezulu.
Ukongeza, kuyafuneka ukuba uthathe ingqalelo nokuba ngaba ngumnxeba wasimahla okanye onomsebenzisi. Kuba ngaphezulu kwesihlandlo esinye, umqhubi ukwazisa usetyenziso lwayo kwifowuni ebuzwayo, kungoko ke ukongeza i-bloatware kuyo. Ngale ndlela bayongezwa kwizicelo eziveliswe ngumenzi okanye ngumntu wesithathu. Nangona le yinto incitshisiwe, kwaye abanye abaqhubi abayenzi.
Uluvo kukuba abasebenzisi bazakusebenzisa ezi zicelo kwifowuni yabo ye-Android. Yinjongo ephambili abafakelwe yona, kodwa kwiimeko ezininzi, konke abakwenzayo kukuthatha indawo kwifowuni, kunye nabasebenzisi abacaphukisayo. Kuba uninzi lwezi zicelo aziboneleli nganto kumsebenzisi, okanye kukho ezinye ezibonelela ngenkonzo engcono.
Ukongeza, kwezinye iimeko, ezi zicelo zibangela iingxaki zomsebenzi kwi-Android okanye Yidla ibhetri engaphezulu kunezinye izicelo ezininzi kwifowuni, njengoko izifundo ezininzi zibonisile. Eyona nto ngokungathandabuzekiyo iyabacaphukisa abasebenzisi abanale bloatware kwifowuni yabo, kwaye abanako ukuyisusa njengenkqubo yenkqubo.
Kuya kubakho ezinye zezixhobo zebloatware onokuzisusa, kokubini kuseto, kwaye ngokunqakraza kuzo okanye kuGoogle Play. Kodwa abanye, ukuba yinkqubo, ayizukubakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Yintoni ibloatware kwi-Android?
Iqonga leSpoorky liyamangalisa: yenza amanqanaba akho kwaye udlale abanye babadlali
I-Samsung Galaxy A iya kusebenzisa izikrini ze-LCD